The Ab Presents Nepal » ओलीलाई राजाको जस्तो सम्मान, सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न उठे?ठिक कि बेठिक आफ्नो विचार कमेन्ट गरौ !
ओलीलाई राजाको जस्तो सम्मान, सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न उठे?ठिक कि बेठिक आफ्नो विचार कमेन्ट गरौ !
कम्युनिस्ट सरकारका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली बेलाबेला विवादमा आइरहन्छन् । ओली विवादमा आउनुको कारण कसैलाई थाहा छैन ।
तर, ओली धेरै विवादमा आउन थालेपछि उनका सहयोगी र सल्लाहकारहरूले रोकथाम गर्नुपर्ने हो । त्यो कार्य गरेको देखिदैन । बरु ओलीको आलोचना हुने गरेर बनाइएका कार्यक्रमको सहयोगी र सल्लाहकारहरूले बचाउ गर्ने गरेका छन् । यो कार्यले ओलीको पहिलोको छविमा ह्रास आएको चर्चा हुन थालेको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई विलाशी गाडी किन्न १७ करोड रुपियाँ दिनेदेखि महँगो सुविधा सम्पन्न हेलिकप्टरसम्मका कुरामा ओली विवादित भएका छन् ।
बजेटमा ‘मेरो सरकार’ शब्द राखेर ओली र भण्डारी झनै विवादित हुन पुगे । उनीहरूको जनस्तरसम्म विरोध भयो । राष्ट्रपति भण्डारीको सवारी पनि राजाकै शैलीमा भयो भनेर आलोचना पनि हुने गरेको छ ।
ओलीलाई शनिबार त्यस्तै खालेको अर्को विवादमा फेरि पारिएको छ । काठमाडौंको कोटेश्वरमा वृक्षारोपण दिवसका दिन आयोजित सरकारी कार्यक्रममा ओलीलाई विवादित बनाउने गरी मञ्चमा राखिएको छ ।
वन मन्त्रालय आयोजक रहेको सो कार्यक्रममा मञ्चमा ओली बस्ने कुर्सीलाई सबैभन्दा अगाडि राखिएको छ । ओलीको पछाडि लस्करै मन्त्री र उच्च कर्मचारीहरूलाई राखिएको छ ।
ओलीको कुर्सी पछाडि ओलीकी पत्नी राधिका शाक्य, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, कानूनमन्त्री भानुभक्त ढकाल, सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित लगायतका रहेका छन् । ओली मन्त्रीहरूसँग कुर्सीको एउटै लहरमा बस्न नहुने गरी राजालाई जस्तो गरेर राखिएकोमा सामाजिक सञ्जाजलमा आलोचना भएको छ ।
एउटै मञ्चमा बसेर पनि ओलीलाई मात्रै अगाडि बस्ने व्यवस्था गरेर के सन्देश दिन खोजिएको हो भनेर सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न उठेका छन् ।
रिपब्लिका दैनिकले प्राप्त गरेको तस्वीरमा वन मन्त्री शक्ति बस्नेत रोष्टमबाट बोल्दै गरेका छन् । अमिल्दो र असुहाउँदो गरेर मञ्च व्यवस्थापन र ओलीलाई राखिएकोमा नेपाली कांग्रेसले समेत आलोचना गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले दुईतिहाइको दम्भले गर्दा सरकारले आँखा नदेख्ने भएको टिप्पणी गरेका छन् ।संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सबै बराबरी हुन् उनले भने हाम्रा प्रधानमन्त्रीजीलाई निरंकुश राजा बन्ने भुत चढेको छ जस्तो मैले बुझेको छु ।